သင်၏မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း Ubuntu Touch (Ubuntu Touch) ကိုလွယ်ကူစွာမည်သို့ဖွင့်ရမည်နည်း Linux မှ
သင်၏မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း Ubuntu Touch (Ubuntu Touch) ကိုလွယ်ကူစွာမည်သို့ဖွင့်ရမည်နည်း။
ဣဇာက်သည် | | အန်းဒရွိုက်, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
UBports ဖောင်ဒေးရှင်းဤစီမံကိန်းနောက်ကွယ်မှဂျာမန်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖောင်ဒေးရှင်းသည်အတွေ့အကြုံတိုးတက်အောင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပြီး၎င်းမိုဘိုင်း operating system ကို Android ဖုန်းများပေါ်တွင်တပ်ဆင်လိုသူများအတွက်လွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်သည်။ ဒီ၏သက်သေသစ်ကိုဖြစ်ပါတယ် Ubports အတွက် Installer Ubports သူတို့လွှတ်ပြီ အထူးသဖြင့် OnePlus2ရှိသူများအနေဖြင့်ဤ terminal ကို Linux mobile သို့လွယ်ကူစွာပြောင်းလဲနိုင်သည်။
Ubuntu Touch ဟာအလွန်ကောင်းတဲ့မိုဘိုင်း operating system တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိပြီးပါပြီ။ လူတိုင်းပြောနေကြတဲ့ပေါင်းစည်းမှုကရောက်လာပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ပျက်သွားနိုင်ပုံရသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ Canonical သည်ဤစီမံကိန်းကိုရပ်စဲခဲ့သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကဤအခြေခံအုတ်မြစ်သည်၎င်းကိုပွေ့ဖက်ထားပြီးဆက်လက်ရှင်သန်နေစေသည်။ ထို့အပြင် iOS သို့မဟုတ် Android ရွှေ့ပြောင်းခြင်းကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
ယခုတွင်သင်သည် UBports Installer အသစ်သို့မဟုတ် Ubuntu Touch Installer အသစ်ကိုသင်ထည့်သွင်းနိုင်သည် မဆိုထောက်ပံ့ device ကို အနည်းဆုံးအားထုတ်မှုနှင့်အတူ, လက်ဖြင့်လက်ဖြင့် ROM အသစ်များကိုတပ်ဆင်ရန်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းတစ်ခုခုမှားယွင်းနေလျှင်၎င်းသည်အသုံးမ ၀ င်ပါကအန္တရာယ်ပြုစရာမလိုဘဲသင်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုကောင်းစွာမသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒီအဆင့်ကိုသင်၏ Windows PC, macOS or မှအဆင်ပြေစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် GNU / Linux ကနေ။ ဤပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သောကြောင့်သင်၌တိကျသောစနစ်တစ်ခုတောင်မလိုအပ်ပါ။
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့သော UBports Installer 0.7.4-beta version သည်အဓိကပြောင်းလဲမှုများနှင့်တိုးတက်မှုများရှိခဲ့သည်။ အထင်ရှားဆုံးတစ်ခုမှာပါဝင်သည် OnePlus2စမတ်ဖုန်းများ အဆိုပါထောက်ခံစာရင်းအကြား။ ထို့ကြောင့်၊ အကယ်၍ သင့်တွင်ဤမော်ဒယ်လ်များထဲမှတစ်ခုရှိပြီး၎င်းသည် Linux ကိုဒုတိယသက်တမ်းပေးလိုပါက Ubuntu Touch ကိုအလွယ်တကူထည့်သွင်းရန်ဤအဆင့်များကိုလိုက်နာနိုင်သည်။
ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ် ရရှိနိုင်နောက်ဆုံးပေါ်တည်ငြိမ်ဗားရှင်း download လုပ်ပါဤဆောင်းပါးကိုရေးသားစဉ်က ၀.၈.၇ ဖြစ်သည်။ ထွက်ရှိနောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုရယူရန်အောက်ပါအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ
အနိမ့်နှင့် အထုပ် button ကိုကလစ်နှိပ်ပါ UBports Installer မှ Windows, MacOS အတွက်သို့မဟုတ်သင်၏ Linux distro အတွက် download လုပ်ရန်လိုသည်။ Linux ကိစ္စတွင် DEB, Snap, သို့မဟုတ် Universal AppImage packages များရှိသည်။
သင် package ကို download ပြီးတာနဲ့သင်လုပ်နိုင်သည် ဒီအထုပ်ကို install လုပ်ပါ သငျသညျသူတို့အားဝိသေသလက္ခဏာများကိုအခြားအထုပ်နှင့်အတူလိုအဖြစ်။ ဥပမာအားဖြင့်:
DEB ကို Gdebi ဖြင့်ဖွင့်နိုင်သည်၊ ၎င်းကိုဂရပ်ဖစ်ထည့်သွင်းရန်သို့မဟုတ် command line မှ package manager ကိုသုံးနိုင်သည်။
AppImage အတွက်၎င်းသည် execute permissions ကိုပေးပြီး၎င်းကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါ။
သင်၏ distro တွင်ထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့်နောက်တစ်ချက်မှာယင်းတို့ကိုလိုက်နာရန်ဖြစ်သည် အခြားအဆင့်များ:
ပြေးပါ UBports ထည့်သွင်းသူ.
ယခု၊ သင်၏ OnePlus2(off) ကိုသင်၏ PC နှင့် cable မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ပါ ယူအက်​​စ်ဘီ.
UBports Installer တွင်ကိုအသာပုတ်ပါ Device ကို manually ရွေးချယ်ပါ.
ပေါ်လာတဲ့ ၀ င်းဒိုးအသစ်မှာ Ubuntu Touch ကိုတပ်ဆင်ရန်သင်နှင့်သင်ယခုပင်ချိတ်ဆက်ထားသည့်သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုရွေးချယ်ပါ။ OnePlus 2.
စာနယ်ဇင်းများ ကို Select လုပ်ပါ.
ယခုနောက်လာမည့်ဖန်သားပြင်တွင်အချက်အလက်များကိုသင်ကဲ့သို့ချန်ထားနိုင်သည်သို့မဟုတ်ချန်နယ်ကိုပြောင်းနိုင်သည်။ အဆိုပါ OTA သင် install လုပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ဗားရှင်းသွားကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့် OTA-15 သို့မဟုတ်သင်နှစ်သက်သောမူကွဲအသစ်များ
သင်လိုချင်သောပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်နှိပ်ပါ Install system ကို install လုပ်ဖို့။
၎င်းသည်သင့်အားသတိပေးစာတစ်စောင်ပို့သည် ဆက္သြား ဆက်ရန်
ဒါဟာသင့်ကိုမေးလိမ့်မယ် စကားဝှက်ကို သင်၏ system administrator ကိုသင်ဆက်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
စာနယ်ဇင်းများ OK နောက်ကိုလိုက်ရန်
ယခုကိုနှိပ်ပါ ပါဝါခလုတ်ကို စခရင်မြင်ကွင်းကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း။
သင်၏ PC ဖန်သားပြင်တွင်သင်လိုအပ်သည့်စာတစ်စောင်ပေါ်လာသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည် accept.
အရာအားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီဆိုလျှင်သင်၏ OnePlus2နှင့် UBports Installer တွင်ကွဲပြားခြားနားသောဖန်သားပြင်များပေါ်လာသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ မင်းဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး esperar.
ထိုအခါသင်၏ OnePlus2ပြန်လည်စတင်နှင့်၏တင်မျက်နှာပြင် Ubuntu ကို Touch ကို.
သင်၏ terminal တွင်သင်၏ Ubuntu Touch ကိုခံစားနိုင်ပါပြီ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » သင်၏မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း Ubuntu Touch (Ubuntu Touch) ကိုလွယ်ကူစွာမည်သို့ဖွင့်ရမည်နည်း။
မင်္ဂလာပါ၊ Arch Linux ပါ ၀ င်သည့်လက်ပ်တော့တစ်ခုမှ One Plus2စမတ်ဖုန်းတစ်ခုတွင်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းတပ်ဆင်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအလွန်လွယ်ကူပြီးအလွန်မြန်ဆန်ပါသည်။
PeerTube 3.1 သည် transcoding တိုးတက်မှု၊ interface နှင့်အခြားအရာများပါ ၀ င်သည်